တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ခေတ်ပြိုင် ... နှင့်ပြိုင် ...
Posted by မေဓာဝီ at 9:35 AM
မမေရဲ့ ဒီပို့စ်ကို တွေ့တော့ ကျနော့်စာကို အပြင်ခံရတာကို သတိရလာတယ်။ (ကြော်ငြာဝင်မှ :D) ရိုးမ-၃ ကို ကျနော် ပေးလိုက်တဲ့ `အကောင်းထူး မရှိ´ ဆိုတဲ့ စာတပုဒ်မှာ ကျနော်က တမင်တကာကို အကောင်းတွေ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စာရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ `ရှေ့ကင်းနောက်ကင်းကြောင်း အကောင်းထူး မရှိ´ လို့ နိဂုံးချုပ်ထားတာကို အဲဒီက အယ်ဒီတာက ကျနော် သတ်ပုံမှားတယ် အမှတ်နဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပါ `အကြောင်းထူး မရှိ´ လို့ စေတနာနဲ့ ပြင်ပေးလိုက်တော့ ကျနော် ဆိုလိုချင်တဲ့အချက်ပါ ချော်သွားရော…။ ဒါက ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောပါပဲလေ လို့ တွေးပြီး ဒီတိုင်း ထားလိုက်ရတယ်။ အခုစာကိုလည်း ခေတ်ပြိုင်တာဝန်ရှိသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါးရှင် ဆရာဏီသစ် တယောက်ယောက် လာဖတ်မိရင်တော့ ပိုကောင်းမယ် ထင်တာပါပဲ။
အင်တာနက် အပါအ၀င် စာနယ်ဇင်းတွေ ဖတ်တဲ့အခါ အမှားတွေကို အမြဲခလုတ်တိုက်မိလို့ ဟပ်ထိုးမလဲအောင် မနည်း သတိထားနေရတယ်။ ကြာတော့ “ငါဘာသာ မဖတ်ဘဲနေ အကောင်းသားလို့“ ပဲ သဘောထားလိုက်တော့တယ်။ အမှားတွေ များလွန်းတော့ ကိုယ်သိထားတဲ့ အမှန်လေး ပျောက်မသွားအောင် မနည်းသိမ်းထားရတယ်။ အမှားတွေအတွက် ပထမ - စာရေးသူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒုတိယ - အယ်ဒီတာတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ မှားမှန်းလည်း မသိ၊ မှန်မှန်းလည်း မသိ၊ ရေးချင်တာတခုပဲ သိသူတွေ ရှိနေသမျှ အမှားတွေ ဒလဟော အောတိုက်နေဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
8/16/2007 2:02 PM
သေးပါ နဲ့ ပါသေး… ဗမာစကားမှာ ပြောလေ့ပြောထရှိတာက
ပါသေး ဟာ သေးပါထက် အသုံးများသလို နာထောင်နေကြမို့
အဲဒါလေးကို ဖတ်မိလိုက်တယ်. မမေထောက်ပြတော့မှပဲ အမှားတွေ ပါနေတာတွေ့ရတော့တယ်. အယ်ဒီတာတွေက စာတွေကို သေသေချာချာ မဖတ်တာပဲလား. ဒါမှမဟုတ် မသိတာပဲလား မသိပါဘူးဗျာ.
သုမောင်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးကိုဖတ်ပြီး ရယ်နေမိတယ်… ဒီပို့စ်လေးကိုလည်း သဘောကျတယ် မမေရေ…
8/19/2007 7:43 AM
Impressive knowledge in Burmese literature.
8/28/2007 9:35 PM
အမရဲ ဘလောက် လေး ကို သူငယ်ချင်း ရဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် က forward လုပ်လိုက်လို့ဖတ်ဖြစ်လိုက်ရပါ တယ်။ “ခေတ်ပြိုင် …….. နှင့်ပြိုင် …….” ကို ဖတ်လိုက် ရ တော့ မျက်လုံး ပြူး သွား ရ ပါ တယ် ခင်ဗျ ။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ကျွန်တော် က ဒီဆောင်းပါးကိုရေး ထား တဲ့ သူဖြစ်နေလို့ ပါ။ ကျွန်တော် ဏီသစ် ပါ အမ မေဓာဝီ။ ပထမ ဦး ဆုံး ပြောချင်တာ က အမှား ကိုထော က် ပြ ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်တာ ပါ။ ဒုတိယ က ဒီအ မှား တွေ က ကျွန်တော့် အမှား ပါ။ ရေး လိုက် ကထဲ က “…နင့်…. ပြင်…” အစါး ‘ …..နှင့် ….. ပြိုင်..’ ဆိုပြီး ရေး လိုက် တာပါ။ (scan လုပ်ပြီး တိုက်တွေကို ပို့ လိုက် တဲ့လက်ရေး မူ ကို ပြန်ကြည့်တော့)
• “…….အလွဲ နှင့် ပြင် ရှိသေး…” နဲ့“……အမိုက် နှင့် ပြင် ရှိ သေး…” ဆိုပြီး ကျန် စါကြောင်း နှစ် ရေး လိုက် မိ ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စပြီး မှားတဲ့ ကျွန်တော် အပေါ် မှာ သာ လုံးဝ တာဝန်ရှိ ပါတယ်၊ အယ်ဒီတာ များရဲ့ အမှား မဟုတ် ပါ။
ထို့ ထက်ပိုပြီး ၀န် ခံ ရ ရင် ကျွန်တော် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ရဲ့ဤ ဆုံးမစာ မူ ရင်း ကို မဖတ်ခဲ့ဘူး ပါ။(အခု အမ မမေဓာဝီ တချို့ အပိုင်းလေးတွေတင်ထားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး တင် ပါတယ်) ဤ အသုံး ပြု ခဲ့ သော ဆုံးမစာ လင်္ကာ မှာလည်း တခြား ဆရာကြီး တယောက် စါကိုး ထား ခြင်း မှတွေ့ ရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ သို့ သော် ထို ဆရာကြီး သည် မှန် ကန် စွာ စာ ကိုကိုး ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကသာ ပေါ့ဆ မှားယွင်း စွာ မှက်သားမိလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအတွက် ရလိုက်သော သင်ခန်းစါ မှာ သေချာမှ စာ ကိုကိုး ရန် နှင့် မသေ ချာ လျှင် မူရင်း စာအုပ် စာတမ်း တွင်ပြန် ရှာ၊ လက်လှမ်းမမှီလျှင်အသုံးမပြု့ရန်ဖြစ်သည်။
အမမေဓာဝီရဲ့ တခြား ဆောင်းပါးတွေကိုလဲ့ဖတ်ရပါတယ်၊ အမကစါဖတ်နာပြီးစါကျေ တဲ့သူမဟုတ်တော့ပဲ စါကျွမ်း တဲ့သူဖြစ်နေလို့အခုလို အမှားကို အခုလို ထောက်ပြပြင်ဆင်ပေးတာ ကိုပိုမိုလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့့ဒီဝန်ခံချက်ကိုလည်းအမရဲ့ blogမှာpost လုပ်ပေးထားစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ရဲ့ အမှား ကို အယ်ဒီတာ တွေပေါ် မှာ မသက်ရောက်စေ ချင် လို ပါ၊ ဒါကြောင့် ပါ။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
"...ကျမတို့ ဂျာနယ်လုပ်တုန်းက ဖြစ်ဖူးသလိုပေါ့၊ သုမောင်က သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ထဲမှာ “တမင်တကာ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “တမင်္ဂလာ” ဆိုပြီး တမင်တကာ ရေးလိုက်တာကို.."
ကိုသုမောင် ရေးတဲ့ တမင်္ဂလာ ဆိုတာ မမှားဖူးလို့ထင်တာပဲခင်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေးကဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး ဦးထွန်းငြိမ်းရဲ့အဘိဓာန်မှာလည်း တမင်္ဂလာ လို့ရေးပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဟုတ်စိန် ရဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် ကျမ်းကြီးမှာလည်း တမင်္ဂလာလို့ပဲရေးပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဟုတ်စိန်ဆိုတာက ဘီအေ (ဂုဏ်ထူး) ဘီအယ် ပါ။ တမင်တကာလို့ဖြစ်သွားတာက ဦးနေ၀င်းလက်ထက်က အာဏာပြပြီး မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေပြန်လုပ်ကြဆိုပြီး လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ကျမှ ဆရာကြီးတွေက အပြင်မပြရင်အလုပ်ပြုတ်မှာမို့ ဟိုတစ်လုံးဒီတစ်လုံးလျှောက်ပြင်ပေးပြီး ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း (စာအုပ်ငယ်) ထဲမှာကျမှ ပြောတော့အသံ ဆိုတဲ့ တမင်တကာ လို့ လုပ်လိုက်တာလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
6/02/2014 8:45 PM